Realme X: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gọọmentị | Gam akporosis
N’ezie nwere otu afọ nke kasị mkpa. Branddị ahụ na-akwadebe ịmalite ekwentị ya na Europe n'ime ọnwa ole na ole, nke bụ onye asọmpi ọhụrụ maka ụdị dị ka Xiaomi. N'ime izu ndị a gara aga, akara ahụ egosipụtala ọtụtụ ụdị, dị ka 3 Pro, ọkọlọtọ ọhụrụ ya nke etiti etiti. Ugbu a, ha na-ahapụ anyị na Realme X.
Izu ole na ole gara aga ka akwadoro na Realme X a na-aga dị na May 15. Anyị nwere niile nkọwa banyere nke ọhụrụ a adịchaghị n'etiti-nso Nke ika. Ekwentị nwere ike ịmalite na Europe. Kedu ihe anyị nwere ike ịtụ anya site na ngwaọrụ a?
Ekwentị na-abịa na imewe na retractable n'ihu igwefoto, otu n'ime ejiji taa na gam akporo. Anyị enweela ike ịhụ ya ya na OnePlus 7 Pro n'izu a. N'ụzọ dị otú a, ihuenyo ekwentị na-eji ohere dị ukwuu eme ihe, yana atụmatụ ihuenyo niile. Igwefoto dị iche iche na-echere anyị n'azụ.
1 Nkọwa Realme X
Nkọwa Realme X
Real Madrid X a gosipụtara dị ka nhọrọ dị mma n'etiti oke etiti. A oge a haziri, ọ na-abịa na ezi ese foto na-adịkarị mma ụdịdị. Yabụ ị nwere ike ịmasị ya nke ukwuu, ọkachasị ebe ọ ga-abịa nke ọma maka ego, nke na-eme ka ọ bụrụ ihe na-atọ ụtọ. Ndị a bụ nkọwa ya:
Ihuenyo: AMOLED 6,53 inch na FullHD + mkpebi 2.340 x 1.080 na 19,5: 9 ruru
Nchekwa ime: 64/128GB
Rear igwefoto: 48 MP nwere oghere f / 1.7 + 5 MP f / 2.4 na HDR
Usoro njikwa: Akara 9 Android na ColorOS 6.0
Batrị: 3.765 mAh nwere 20W VOOC Fast Charge
Njikọ: Dual 4G, WiFi 5, Bluetooth 5, ụdị USB C, aptX na aptX HD, LDAC
ndị ọzọ: On na ihuenyo akara mkpisiaka agụ, Kpọghe ihu
Akụkụ: 161.3 x 76.1 x 8.55 mm
Ibu ibu: 191 grams
Anyị na-ahụ nnukwu ihuenyo na ekwentị ahụ, nke a na-eji ọbụna karịa ekele maka enweghị ọkwa na ya. Ya mere, anyị nwere ike ịtụ anya ahụmịhe na-emetụ n'ahụ na ihuenyo mgbe na-ewe ọdịnaya. Igwefoto bụ ihe ọzọ n'ime ike ekwentị a. Igwefoto azụ abụọ na ya, na 48 MP dị ka isi, ihe anyị na-ahụ ọtụtụ na Android taa. N'ihu, a na-eji 16 MP otu, yana usoro nkwụghachi azụ
N'aka nke ọzọ, Realme X a na-ahapụ anyị ezigbo batrị nke ikike 3.765 mAh. Na mkpokọta na Snapdragon 710 na ọnụnọ nke Android achịcha, ọ na-ekwe anyị nkwa nnwere onwe dị mma n'oge niile. Na mgbakwunye, batrị batrị na-abịa ọsọ ọsọ n'oge niile. Ngwaọrụ na-abịa ma ihe mkpịsị aka mkpịsị aka, nke a na-agbanye n'ime ihuenyo ahụ, na ịmeghe ihu. Ya mere ndị ọrụ ga-enwe nhọrọ abụọ dị na ngwaọrụ ahụ. Nhọrọ dị mma n'echiche ahụ.
N'oge ahụ, a mara ọkwa mmalite nke Realme X a na China, ebe akara ahụ malitere tinyekwa ekwentị ha n’ime izu ole na ole ndị sochirinụ. Ọ ga-abụ na Mee 20 mgbe a ga-ewepụta ya na mba ahụ. N'oge a ọ dịghị ihe ekwuru banyere mmalite nke ngwaọrụ na ahịa ndị ọzọ. Mana ọ ga-ekwe omume na a ga-ebikwa ya na Europe n'oge na-adịghị anya.
Ekwentị bịara na agba abụọ, acha anụnụ anụnụ na ọcha. Anyị na-achọtakwa ọtụtụ nsụgharị ya dabere na RAM na nchekwa dị n'ime. Yabụ ndị ọrụ ga - ahọrọ Realme X nke dabara adaba na ihe ha na - achọ. Ahịa nke ụdị nke ọ bụla bụ:
Versiondị nke nwere 4/64 GB: efu 1.499 yuan (ihe dị ka euro 194 iji gbanwee)
6dị 64/1.599 GB na-efu yuan 207 (ihe dị ka euro XNUMX iji gbanwee)
Versiondị nke 8/128 GB dị ọnụ na 1.799 yuan (ihe dị ka euro 233 ịgbanwe)
Realme X mbipụta pụrụ iche 8/128 GB: 1.899 yuan (ihe dị ka euro 246 ịgbanwe)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Realme X: premiumdị ọhụrụ ọhụụ ọhụụ ahụ
Mepee portal na akụkụ ọzọ na ụlọ gị site na eziokwu dịwanye elu nke PHAROS AR